लमजुङ, पुस २८ गते । हिमाली जिल्ला मनाङमा स्याउ उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएको छ । स्याउ खेती गरिएको जग्गासँगै उत्पादन बढेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (स्याउ जोन) मनाङले जनाएको छ । पछिल्लो समय हाइब्रिड (वर्ण शङ्कर) स्याउ लगाउन थालेपछि बर्सेनि यसको उत्पादन बढेको स्याउ जोन मनाङका प्रमुख कृषि अधिकृत राजेश्वर सिलवालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मनाङका कृषकले रैथाने स्याउसँगै वर्ण शङ्कर स्याउ खेती र उत्पादनमा जोड दिन थालेको छ ।
स्याउ जोन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २०७ हेक्टरको जग्गामा लगाइएको स्याउबाट ९१६ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ । यसमा ८९ हेक्टर मात्र उत्पादनशील छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९१० मेट्रिक टन स्याउ फलेको थियो । त्यसअघि आ.व. २०७३/७४ मा ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८२५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । आ.व. २०७२÷७३ मा ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६६५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो ।
स्याउ जोन मनाङका प्राविधिक सहायक योवनकुमार सुनुवारका अनुसार मनाङका किसान स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किसानले चासो दिन थालेका हुन् । फल क्षमता बढी भएका बिरुवा लगाइनु, उन्नत जातको बिरुवा लगाउनु, सिँचाइ र मलखादको राम्रो व्यवस्था भएकाले स्याउ उत्पादन बढेको उहाँले बताउनुभयो । ठाउँ त्यही हो, किसान उही । खेती गर्ने तरिका फरक भएको छ । उत्पादन राम्रो हुँदै गएको, उहाँले भन्नुभयो ।
सिँचाइ, मलखाद र उपचार राम्रो हुँदा तथा साना बोट धेरै ठाउँमा फिजिने भएकाले थोरै जग्गामा पनि हाइब्रिड जातका स्याउको उत्पादन बढी हुने गरेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । स्याउ जोन परियोजनाले जिल्लाको चामे, मनाङ ङिस्याङ, नार्पाभूमि र नासों गरी चार वटै गाउँपालिकाका सम्भावित ठाउँमा स्याउ फलाउने योजना अघि सारेको छ ।
पहिलोपटक नार्पाभूमि गाउँपालिका २ मेताबेंसीको तीन हजार चार सय मिटर उचाइको जग्गामा स्याउ खेती गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि स्याउ खेती गरिँदै आएको मनाङ ङिस्याङ, चामे र नासों गाउँपालिकाका हरेक वडामा स्याउ खेतीका लागि जग्गा छनोट गरिएको छ । मनाङमा करिब एक सय हेक्टरमा लगाइँदै आएको स्याउ खेती एक हजार दुई सय हेक्टरसम्म गर्न सकिने सम्भावना रहेको जोन अधिकृत सिलवालले बताउनुभयो । स्याउ खेती विस्तारसँगै अबका वर्षमा स्याउ उत्पादन बढ्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । मनाङका ७० प्रतिशत स्याउ काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बेंसीसहरका बजारमा बिक्री हुने गरेको किसानले बताएका छन् ।